This entry was posted on Monday, August 11, 2008 and is filed under psycho test . You can leavearesponse and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .
Filed under psycho test
ko ko taw tal kwar...bal thu yay dar lal pyaw par own...
ကျွန်တော်တော့ရည်းစားဘ၀တုန်းက နှစ်ယောက်အတူထိုင်ကြတဲ့အခါ ကြားမှာဘာပစ္စည်းမှမချထားတတ်လို့ (၄) ခုထဲက တစ်ခုမှမရွေးနိုင်ခဲ့ဘူးဗျာ။ :P
အဲဒီ category လေးတစ်ခုထပ်ထည့်ပေးနိုင်ရင်တော့ကိုယ်ဘယ်လိုချစ်တာလဲသိရမှာပေါ့နော..
မှန်ပါတယ်။ ကျွန်မ ရွေးလိုက်တဲ့ဟာနဲ့ဖြေထားတဲ့အဖြေဟာ ကွက်တိပဲမို့ဒီပိုစ့်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘာရွေးတယ်ဆိုတာတော့ မပြောတော့ဘူးနော်။
ဟဲဟဲ..ကျွန်တော်ကတော့ ဖတ်ပဲဖတ်တတ်တယ်..မေ၇းတတ် ဘူး ဗျ..ကောင်းပါတယ်..အားပေးလျက်ပါ..
ရွေးလိုက်တာ..မှန်သွားပါတယ်။ မျှဝေတာ ကျေးဇူးပါ။
ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အဖြေနဲ့ သုံးသပ်မှုက ထပ်တူနီးပါးပဲ...
ဒီလို မျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်... :)
ဘာရွေးလိုက်လဲ ဆိုတာတော့ ပြောမပြတော့ဘူးနော်... ရှူး... :P